Dubbii himaa Samayaawii Partii han ture, Obboo Yoonaataan Tasfaayee "ergaa Adda Bilisummaa Oromoo Feesbuukii irratti oggaa geggeessu argame," jechuudhan himannaan irratti baname. Yoonaataan, mormiin Oromiyaa keessatti ji'oota shan dura ka'e akka itti fufu maqaa Feesbuukii Yoonaataan Tarreessaa Raggaasaa jedu fayyadamee hojii shororkeessummaa hojjachaa tureera jedha, himannan irratti baname. Hidhamee ji'a afur booda torban darbe mana murtiitti dhihaatus, abboottin seeraa guutanii waan hin argamneef, bellamni mana murtii caamsaa 23 bara 2016tti qabameera.
Dhabbanni mirga dhala namaatii falmmu, Amnistii Intarnaashinal garuu himanni kun waan hinjiree irratti hundaaheti jedhee, mootummaan Itoopiyaa hatattaman nama beekaama fi siyaasaa kana dabalatee, namoota yakka wal-fakkaatun himataman akka gadhiisu gaafata. Daayreektariin damee Aministii Intarnaashinal Gaafa fi Baha afrikaa, Mutoonii Waanyeekii, "mootumman Itoophiyaa namoota yaada isaanii morman hunda hidhuu fi shororkeessummaaadhan himachuu ittuma fufeera" erga jette booda, "Yonaataan Oromiyaatti lafti sammamaa jirachuu barreessera. Kunimmoo balleessaa mitti; Shororkeessummaa ta'us hin danda'u.Yoonaataan Adda Bilisummaa Oromootin waan walitti isa fidu tokkoohuu natti hin mullaatu," jetti. Mutooniin dabaltees, himannaan akkanaa kun mootumman seera shororkeesummaa baase, han rakkoo guddaa qabu kana hojiirra olchuudaa waan hudda yaalaa jirachuu agarsiisuu ibsite.
Karaa braatin hoogantoota Aandinet paartii duraanii keessaa tokko han ta'an Daani'eel Shibashii fi Samaayaawii paartii keessaa Yeshiwaas Asaffaa guyyaa harraa mana hidhaatii bahan. Obbo Abrahaa Dasta ( qama hoogansa Aranaa Tigraay han turan), Adoolessa 8 bara 2016 hidhaa dha baha jedhamee eggama.
Himannaa Yoonaataan Laalchisee Amnistii Intarnaashinaal Ibsa Baase
Gabaasa Amnestii Kan Haala Qabinsa Mirga Dhala Namaa Bara 2015